Ilhaan Cumar Oo Beenisay Eedeymo Lagu Sheegay Inay Tahay Yuhuud-Nacayb – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAIlhaan Cumar Oo Beenisay Eedeymo Lagu Sheegay Inay Tahay Yuhuud-Nacayb
Ilhaan Cumar Oo Beenisay Eedeymo Lagu Sheegay Inay Tahay Yuhuud-Nacayb
July 10, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Ilhaan Cumar Oo Beenisay Eedeymo Lagu Sheegay Inay Tahay Yuhuud-Nacayb
Warqaat.Com):–Ilhaan Cumar oo ah Murashax u taagan Kursiga Kongareeska ee uu banneeyey Xildhibaanka Muslimka ee Keith Ellison waxay gaashaanka u daruurtay eedeymo lagu sheegay inay Twitter-keeda ku qortay sannadkii 2012-kii inay Dowladda Yuhuuda tahay Rejiim Midab-takoor iyo erayo kale oo Yuhuud-nacayb ahaa.
Wareysi ay siisay Telefishinka ABC ee laga leeyahay dalka Maraykanka waxay ku sheegtay in ay eedeyntaasi tahay naqdin ka timid Siyaasiyiinta Muxaafididka ah.
Waxay Wareysigeeda ku sheegtay inaysan Eedeymahaasi lahayn wax qiimo ah, isla markaana waxay ka gaabsatay inay Raalli-gelin ka bixiso ama ay ka laabato Qoraalkii ay Twitter-keeda soo dhigtay bishii November ee sannadkii 2012-kii ee la sheegay inuu ahaa hadalo Yuhuud-nacayb ah.
Waxay kaloo Twitter-keeda ku sheegtay inay Dowladda Yuhuudda tahay Dowlad Midab-takoor oo dhibaato ku ah Caalamka, kuna dhaqanta Camalka Shaydaanka.
Ilhaan Cumar waxay qoraalkaasi soo dhigtay barteeda Twitter-ka 2 maalin kadib, markii ay Ciiddanka Yuhuudda bilaabeen Hawlgal ka dhan ah dadka Reer Falastiin ee ku nool Marinka Qasa.
Yuhuudda waxay xilligaasi sheegeen inay Kooxaha Mukhaawamadda Falastiin ay 100 Hoobiye ku garaaceen deegaano ku yaalla Koonfurta Yuhuudda.
Dhinaca kale, Isbuucyadii la soo dhaafay waxay Ilhaan Cumar heshay Qoraalo Twitter oo iyada lagu naqdinayey, waxayna mar ay u jawaabaysay Qoraal iyada loo soo dirray ku sheegtay inmuujinta inay Dowladda Yuhuudda tahay Dowlad Midab-takar mid ka fog Nacaybka dadka Yuhuudda loo muujiyo.
Si kastaba ha ahaatee, Ilhaan Cumar waxay ka mid tahay Murashixiinta u tartami doona Kursiga Xisbiga Dimuqraadiga ee Xildhibaanka Keith Ellison oo isagu ah Xildhibaankii ugu horreeyey ee loo doorto Aqalka Kongareeska Maraykanka.
Keith Ellison waxa uu u tartami doonaa xilka Xeer-ilaaliyaha Guud ee Gobalak Minnesota, isagoo aan doonaynin in mar kale loo doorto.
Si kastaba ha ahaatee, Ilhaan Cumar waxaa Kursiga Kongareeska kula tartami doona Murashixiin kale oo ay ku jiraan dhowr Haween Muslim ah.
XOG: DF Somalia oo hub culus ku wareejineysa Sh.Muqtaar Roobow….
Wasiirka Arrimaha Dibada Oo Gaaray Dalka Shiinaha Iyo Ujeedka Safarkiisa
684,818 total views, 9,484 views today
684,818 total views, 9,484 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
684,691 total views, 9,483 views today
684,691 total views, 9,483 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
684,724 total views, 9,486 views today
684,724 total views, 9,486 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
684,787 total views, 9,488 views today
684,787 total views, 9,488 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
684,841 total views, 9,483 views today
684,841 total views, 9,483 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]